မုံရွာ ရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးထားသူတဦး စစ်ဆေးရင်း သေဆုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မုံရွာ ရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးထားသူတဦး စစ်ဆေးရင်း သေဆုံး
မုံရွာ ရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးထားသူတဦး စစ်ဆေးရင်း သေဆုံး
Posted by True Faith on Jul 16, 2010 in Myanma News |6comments
ရေးသူ – မင်းနိုင်သူ
“မနက် (၁၀) နာရီ လောက်မှာ သူ့မိန်းမက သူ့ယောက်ျားကို သေအောင် ရိုက်တဲ့ရဲတွေကို မကျေနပ်ဘူး ၊ အထက်ကို တိုင်မယ် ၊ ဘုရားကယ်ပါ ၊ တရားကယ်ပါနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ အော်ဟစ်နေတော့မှ သေသွားပြီဆိုတာ သိကြရတာ”ဟု မုံရွာ ဒေါနခြံ ရပ်ကွက် သားတဦးက ပြောသည်။
(ဧရာဝတီ သတင်းဌာနမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
“My son was murdered. He was murdered. He was murdered. He was murdered,” she said, calm but forceful, enunciating every word and looking straight into the dozens of news cameras that had gathered outside the courthouse.
အပေါ်ကလင့်ခ်ရဲ့ သတင်းက ဂျူလိုင် ၈ ရက်က အမေရိကမှာဖြစ်တာပါ။ ဂရန့်ဆိုတဲ့အမဲလူငယ်ကို ရထားပလက်ဖောင်းဘေးမှာ ရဲကသေနတ်နဲ့ ဘလိုင်းကြီးပစ်သတ်လိုက်တာမို့ သူ့အမေက ရဲကိုတရားစွဲပြီး နောက် တရားရုံးအပြင်ဖက်မှာ မီဒီယာကို ပြောနေတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ ကျုပ်က ရေဒီယိုနားထောင်ရင်း အမဲအဖွားကြီးငိုသံ၊ဒေါသသံနဲ့ အဲဒီပြောသံကြားရလို့ စိတ်ထဲတောင် တမျိုးကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။
အဲဒီကိစ္စက အင်မတန်ကြီးကျယ်သွားပြီး အဓိဂရုန်းအထိဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရားရုံးက အဖြူရဲအရာရှိကို ထောင်ချလိုက်တာမို့ အမူကပြီး လူတွေလည်း ငြိမ်သွားရောဆိုပါစို့။
ဆိုလိုချင်တာက ရဲဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ် ဗမာတွေပြောနေကျစကားနဲ့ပြောရရင် “ရှင်တို့ကရဲတွေပဲ” ဆိုတာကြီးမျိုးလားလို့။
ထိုက်သင့်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ပဲပေးသင့်ပါတယ် ။ မတရားဖိနှိပ်တာမျိုးတော့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့ ။
kyaw nanda mon says:
တယ်ခက်ပါလား …. အဲ့သလောက် ပညာမပြကြနဲ့လေ … ခိုးမှုပေါ်သွားတယ်ထားဦး .. အလွန်ဆုံး ထောင်ကျ လေးငါးနှစ်ပေါ့ … ခုဟာက သေသွားတယ်ဆိုတော့ … အင်း !!!